PixBit - အိုင်ကွန် Pack ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » PixBit - အိုင်ကွန် Pack ကို
PixBit - အိုင်ကွန် Pack ကို APK ကို
• 860 + icons များပါဝင်သည်။
• 12 launchers များအတွက်ပံ့ပိုးမှု
(Action Launcher ကို, Nova Launcher ကို, Apex Launcher ကို, Atom Launcher ကို, Aviation ဖွင့်တင်, Go ကိုဖွင့်တင်, KK ဖွင့်တင်, Next ကိုဖွင့်တင်, တစ်ကိုယ်တော်ဖွင့်တင်, Smart Launcher ကို LG ကနေအိမ်, ADW Launcher ကို။ )
• CyanogenMod Theme အင်ဂျင်ထောက်ခံ
• Muzei ပံ့ပိုးမှု
screenshots များအတွက် widgets Zooper Pro ကိုများအတွက်န့်ကိုဖြစ်ကြသည်။
သငျသညျအိုင်ကွန် pack ကိုလျှောက်ထားရန် CyanogenMod Theme Engine ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါလျှင်, သင်သည်ဤ CM Themes သူ့ဟာသူထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်သော feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်အစားထိုး icon တွေကို select လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သင် icon တွေကိုတည်းဖြတ်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ launcher ကို install လုပ်ဖို့ရပါလိမ့်မယ်။
အားလုံး icon တွေကို Android ထုတ်ကုန် (ယခုအချိန်အထိ) အတွက်ရရှိနိုင်သည့်အမြင့်မားဆုံးနှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖန်ဆင်းနေကြသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကသန့်ရှင်းချွန်ထက်ကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။
အခြားရွေးချယ်စရာ icon များ:
သင်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ် app ကိုတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအိုင်ကွန်သုံးစွဲဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့လျှင်, သင်တိကျတဲ့အိုင်ကွန်ကိုဆင်းကိုင်ပြီးအားဖြင့်အဲဒီလိုနိုငျသညျ, ဤသူသည်သင်တို့အိုင်ကွန်နှင့်အမည်အားတည်းဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုသေးငယ်တဲ့ပေါ့ပ်အပ်ထဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ ထိုအရပ်မှ, အိုင်ကွန်ကိုရွေးပါ, ဒီ PixBit ကို select နှင့်သင်နှစ်သက်တဲ့အိုင်ကွန်ကိုရွေးပါထို့နောက်အခြားပေါ့ပ်အပ်ပြသပါလိမ့်မယ်။
မကောင်းတဲ့ icon တွေကို?
သငျသညျနှစျလိုဖှယျမဟုတ်သည့်အချို့သော icon တွေကိုရှာတွေ့လျှင်, beta ကိုအသိုင်းအဝိုင်း join ပြီးမကောင်းတဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေးခြင်းမယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုအစားအသိပေးပါ။ links ဖော်ပြချက်ထဲတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
Google Now ဖွင့ ?!
Google Now ဖွင့တစ်စတော့ရှယ်ယာ launcher သည်နှင့်အိုင်ကွန်အထုပ်ကိုထောကျပံ့မပေးပါဘူး။
အန်းဒရွိုက်လိုအပ်သည်: 4.1 နှင့်တက်
Vukasin Andelkovic: အားဖြင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်